वर्ष ३५, अंक २९
July 11, 2018 २०७५ असार २७ गते, बुधबार
– शशिधर भण्डारी
हाम्रो मुलुक निजीकरण, नव उदारवाद र उग्र भूमण्डलीय पुँजीवादको चपेटामा परेको छ । त्यसमा नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार, चर्काे व्यापार घाटा अर्काे गम्भीर समस्याका रूपमा उभिएका छन् । सन् १९८५ मा डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा नेपाल उदारवादमा प्रवेश गरेको थियो ।
तत्कालिन श्री ५ को सरकारको आदेशमा २०२० सालमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लि. स्थापना भएको थियो । त्यतिखेर वाणिज्य निर्देशक गेहेन्द्र देव पाठक थिए । नुनको कारोबार धेरै व्यवसायीले गर्दथे, जसका कारण फरक फरक गुणस्तरको नुन बजारमा उपलब्ध थियो । यसो हुँदा जनतामा कण्ठरोग (गलगाँड) एवं सुस्त मनस्थितिका बालबालिका धेरै भयो भनेर सरकार चिन्तित भएको थियो । कण्ठरोगलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
२०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजधानीको द्वारिका होटलमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलन्न्यास गरे । यससँगै अरुण तेस्रो परियोजना चर्चामा छ ।
विश्व प्रभुत्वको सपना देख्ने युरोपेली मुलुक, एसियाका मुलुक र अमेरिक साम्राज्यवादीका सपना असफलतामा नै टुङ्गिएका थिए र छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व प्रभुत्वको सपना देख्दै आइरहेछ र त्यसका लागि, साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति पनि चलाउँदै आएको छ ।